वाम एकता र कांग्रेस - विचार/विश्‍लेषण - कान्तिपुर समाचार
वामपन्थी एकताको अहिलेको अभियान सम्पूर्ण हिसाबले कांग्रेसको शक्ति खोस्ने व्यूह रचना पनि बनेको छ ।
आश्विन २०, २०७४-नेपाली समाजमा मंगलबारलाई कडा मानिन्छ । भनिन्छ, मंगलबार जे पनि शुभ–काम हुन्छ, त्यसको परिणति निकै कडा हुन्छ । गत मंगलबार नेपालका दुई ठूला मानिने वाम राजनीतिक शक्ति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल माओवादी केन्द्र तथा संविधान लागू हुने बित्तिकै माओवादीबाट अलग्गिएका डा. बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्ति पार्टीबीच एकता स्थापित भएको छ । तर यो एकतासँंगै राजनीतिक संकट पनि जोरिएर आएको छ । राजनीतिक विकासक्रममा ‘मंगलबारे एकता’को प्रमुख सूत्रधार मानिएको माओवादी केन्द्र र यसका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संवैधानिक राजनीतिक प्रक्रियाको पुरै उल्लंघन गरेका छन् । नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच भएको सत्ता गठबन्धन क्रियाशील रहेका बेला, गठबन्धनलाई यथावत राखेर उनी नयाँ चुनावी गठबन्धनमा प्रवेश गरेका छन् । यो सर्वथा अनैतिक सवाल हो । नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यसलाई कसरी हेरेका छन् ? त्यो उनको विवेकको विषय हो । प्रधानमन्त्री देउवा र नेपाली कांग्रेसका नेताहरूलाई प्रचण्डले चुनावसम्म गठबन्धन कायम रहनेमा आश्वस्त गराएको समाचार आएको छ । यो सत्य हो भने प्रचण्डको यो आश्वासनले नेपाली कांग्रेसजस्तो राजनीतिक दलको पुरै अपमान गरेको छ ।
समीकरण फेरिँदो राजनीति ›